Mandroso miadana… azo antoka ho tonga | NewsMada
Mandroso miadana… azo antoka ho tonga
Par Taratra sur 16/07/2020
Mbola lavitra ny lalana? Ho ela ny fotoana… Hatrany amin’ny faran’ny volana aogositra vao mety hihena isa ny tranga vaovao amin’ny fahazoana ny tsimokaretina. Amin’izany, mila misikim-ponitra ny rehetra. Tsiahivina indray ve ny amin’ny fampiharana amin’ny antsipiriany sy manontolo ireo fepetra ara-pahasalamana? Fiarovantena izany, fiarovana ny hafa koa.
Fa takina amin’izao koa ny fifampitokisana fa samy miady miatrika ny fahavalo iombonana, tsy maintsy mijoro sy mandroso : vonon-kandresy. Eo koa ny faharetana sy ny fiaretana fa anisan’ny mampitranga mihemotra amin’ny ady ny fanaovana antsirambina na ny tsy fanarahana ny paikady. Maika tsy faingana? Izay ny mahatonga izao fihibohana tanteraka izao, araka izay azo atao.
Amin’izany, mila mahazo antoka fa ho tonga any amin’ny fandresena farany ny tena. Mandroso hatrany izany fa tsy misalasala, tsy be fanahiana, tsy mitsapatsapa. Tena atrehina sy atao amim-pahamalinana sy amim-pahamatorana ny ady fa tsy zara raha atao na atao tsy fidiny. Mila faharesen-dahatra fa zava-doza izao valanaretina Covid-19 izao: tsy misangy, tsy azo sangina.
Raha miara-mandroso amin’izany amim-pahamalinana, ho mpandresy ny tena. Tsy mbola resy fotsiny ny valanaretina, raha ho an’ny faritra Analamanga, ohatra, fa tsy hoe tsy azo resena. Tsara akana lesona ny lesoka tamin’ny fivahavahana be ihany talohaloha teo? Lasa baranahiny ny famahana kely ny fihibohana, mahataonga ny hoe henjana sy hentitra kokoa ny fampiharana fepetra.
Amin’izao sisa izao, aleo mandeha miadana nefa azo antoka fa ho tonga. Zava-doza sy famitahan-tena ny maika tsy faingana, ny maika tratran’ny miadana. Voatery miverin-dalana tsinona rehefa tsy mahomby ny fihazakazahana na ny fandehanana ivelan’ny lalana efa voasoritra: fanajana fepetra, fifampitokisana, faharetana… Mbola lavitra ny lalana ary ho ela ny fotoana?
“Mbola hihemotra haingana kokoa izay mandroso amim-pirotorotoana tafahoatra”, hoy ny ohabolana sinoa iray izay.